Home Wararka 14 sano ka dib markii AMISOM dalka timid, ayaa wali lahaynin ciidan...
14 sano ka dib markii AMISOM dalka timid, ayaa wali lahaynin ciidan la wareega amniga dalka
14 sano ka dib markii AMISOM dalka timid, ayaan waxaan wali lahaynin ciidan waran oo la wareega amniga dalka. Waxaana dalka la socda shirar lagu tilmaami karo ila meyreyso oo aan wax natiijo ah ka soo bixi karin.
Waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu qabtay shir lagu hirgelinayey Qorshaha ay Soomaaliya kula wareegayso Amniga Dalka (STP) oo dib-u-habayn lagu sameeyey, kaas oo uu soo qaban qaabiyey Xafiiska Amniga Qaranka ee Madaxtooyada JFS, ayna ka soo qayb galeen masuuliyiin ka socday Dowladda Federaalka Soomaaliya, wakiillo metelayey Dowlad Goboleedyada, Gobolka Banaadir iyo Saaxiibbada Soomaaliya ka taageera dhanka amniga.
Previous articleMaxaa isku soo beegay safarka Biixi ee USA & Wadaadka Hargeysa u soo dirtay Shabaab?
Next articleMuse Bixi oo kulan la qaatay K/xigeenka Xoghaya Guud ee QM
Maxamed Mursal oo lunsaday xaqii beesha Digil iyo Mirrifle ku lahayd...